WOWOW Tubada Jikada Gacanta ee Kelida ah oo leh Hoos-u-jiid Buufidda Chrome - Tubooyinka Jikada ugu Fiican 2021 | Tubooyinka Musqusha ee ugu Fiican | WOWOW qasabadaha
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Fududeeyaha Jikada Keli ah ee Lagu Kordhiyo Buufinta Chrome
WOWOW Qaswada Qasacada Kaliya Gacanta Ku Xidh Iyadoo Hoos U Marid Buufinta Chrome
Qashinkan jikada wuxuu ku habboon yahay codsiyada ganacsiga iyo guriga.
Tuubooyinka jikada ee tayada leh oo hoos u dhacaya waxay leeyihiin heer sare oo rafcaan qurxoon.
Soo jiid taped wuxuu awoodaa inuu bixiyo difaac iyo qurxin labadaba.
2310700C Tilmaamaha Rakibaadda
Qalabka jikada ee jikada jikada chrome 2310700C
Qasabada jikada jikada waxay si fudud isugu daraysaa biyo kulul iyo qabow. Waxaad si sax ah ugu dhex qarin kartaa labada durdur ee biyaha ah si waafaqsan baahidaada. Si aan kuugu siino heerkulka biyaha aad u baahan tahay. Isku-dhafka heerkulka biyaha waxaa lagu samayn karaa hal-gacan-qabsi ah mashiinka qasitaanka jikada ee WOWOW. Birta ayaa sifiican ushaqeysa oo biyuhu si fudud ayaa loo xakamayn karaa. Heerkulka iyo biyaha cadaadiska labadaba. Isla markiiba waad ogaan doontaa in lever-ka uu ka kooban yahay qalab tayo sare leh. Iyada oo ay u socoto si habsami leh, oo aan wax khasaare ah ku qabin, waxaad ogtahay in lagaa hubiyo dulqaad cimri dheer.
Waxaad isticmaali kartaa saddex howlood oo biyo ah inta aad qasanayso heerkulka biyaha. Xilliga loo yaqaan 'spout' waxaad dooran kartaa qaabka qulqulka, habka buufinta, iyo habka aqua-blade. Qaabka aqua-blade wuxuu bixiyaa diyaarad biyo xoog leh, oo si dhaqso ah uga nadiifisa dhammaan wasakhda dheryahaaga iyo digsiyadaada. Qaabkan aqua-blade waa hab gaar ah oo aadan kula kulmi doonin tuubooyin badan oo jikada jikada ah. Qaabka buufinku waa hab wax ku ool ah oo lagu mayrida taargooyinka bilaa-ka-madax-bannaan, iyo habka socodka joogtada ahi waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu daadiyo dheriga tusaale ahaan. Dhammaan qaababka biyuhu waxay bixiyaan shaqo biyo-badbaadin ah si ay u habboonaadaan isticmaalka biyahaaga. Sidan ayaad ku biirin doontaa qaybtaada si aad ugu keydiso kheyraadka dabiiciga ah ee yar. Ka sokow, waxaad ku ogaan doontaa tan biilkaaga biyaha, maadaama aad badbaadin karto ilaa 50% isticmaalka biyaha adoo isticmaalaya qalabka jikada jikada ee jikada WOWOW.
Isku darka qolka jikada oo tayo sare leh chrome
WOWOW waxay u heellan tahay inay u fidiso macaamiisheeda tubooyin milatari oo tayo sare leh. Taasi waa sababta WOWOW u isticmaasho agab ka sarreeya dhammaan shuruudaha warshadaha, xitaa kuwa A-brands. WOWOW waxaan aaminsanahay adigoo leh tayo sare inaad isbedel ku sameyn karto suuqa. Mar alla markii qof uu la kulmo qasab qasabeedka WOWOW, isaga ama iyadu waxay noqon doonaan macaamiil noloshooda. Taasi waa sababta aan u aragno saldhiggeena macaamiisha inay sii kordhayaan maalin kasta. Waxaad ku arki kartaa heerkayaga wanaagsan ee barnaamijyadeenna hal abuurka ah sidoo kale, sida aooriyaha aoopliyaha iyo dhameystirka tuubooyinka oo leh habraacyo dusha sare ka soo saaraya. Waxaan hubineynaa inaad u adeegsan karto tubooyinkeena jikada oo tayo sare leh muddo dheer.
Taasi waa sidoo kale sababta aan WOWOW uga cabsaneynno inaan ku siino muddo 5 sano ah oo dammaanad qaadis ah qalabka jikada jikada jikada. Badeecadaha tuubbooyinka badankood waxay bixiyaan kaliya hal sano oo dammaanad qaad ah. Tani waxay qusaysaa sidoo kale A-noocyo badan oo sidoo kale ah. Maaddaama aan qasbo qaswada jikada sida caadiga ah socon karto 1 ilaa 5 sano, hadda WOWOW waxaan ku kalsoonahay inaan ku siino muddo dheer oo ah 10 sano oo dammaanad qaadis ah. Waxay noqon laheyd wax aan caadi aheyn haddii qasabada qasacadaha jikada lagu beddelo 5 sano gudahood kadib markii la rakibo. Oo waxaan ka heli lahayn taas in sidoo kale aan la aqbali karin, gaar ahaan marka loo eego aragtideena. Maxaad ula tacaali lahayd cawaaqibka tan? Taasi waa sababta aan u beddelayno tuubada qolka makiinada jikada haddii ay dhacdo inay 5 sano gudahood sifiican u shaqeyn weydo. Dhibaato la'aan!
Soo jiid tuubada qasitaanka lagu buufiyo
Waxqabadka indha qabashada ee jikada jikada jikada chrome waa buufis cusub oo soo jiidasho leh. Waxaad si debecsan u ridi kartaa madaxa buufinka ah ee qasabadda jikada jikada oo tuubada biyo dhaadheerna ay soo muuqan doonaan. Tuubbada biyuhu waxa aad ku gaadhi kartaa meel kasta oo ag taal gudaha weelka jikada.
Tuubbada biyaha ayaa laga sameeyay silica jilicsan oo jilicsan, sidaa darteed waxaa lagaa hubinayaa inaad si fudud u shaqeyso maadaama ay si habboon u jiidayso. Ka dib marka la isticmaalo, si toos ah ayey ula laaban doontaa sababtoo ah kubbadda cufnaanta leh ee aan sida caadiga ah loogu rakibin khaanadda weelka jikada. Biyaha tubada biyaha sidoo kale waxay ka samaysan yihiin qalab tayo sare leh. Sidan ayaad u baahan tahay inaadan ka walwalin xidhashada, dhibidda ama daadinta. Qalabkan isku-dhafka ah ee jikada ee chrome wuxuu socon doonaa sanado badan, sannado badan. Taasi waa dammaanad qaadasho aan kugu dhiirrigelinno inaan ku siinno.
Ku isticmaal meherad isku dhafan oo jikada chrome
Sababta oo ah tayada sare ee aan ku siino qalabka jikada ee jikada makiinada jikada, qasabadan jikada waxaa badanaa lagu isticmaalaa goobaha ganacsiga sidoo kale. Makhaayadaha iyo baararka sare ee waxqabadka ugu sarreeya ee qalabka jikada ayaa muhiim u ah waxqabadka. Haddii qasabada qolka jikada ay soo dhacdo, waxay qatar ku tahay ganacsiga laftiisa. Sidaa daraadeed, goobaha ganacsiga sida maqaayadaha ayaa kaliya isku hallayn kara waxyaabaha ugu tayada sareeya. Sidaas awgeeda, WOWOW waxaan u aragnaa inay tahay wax abaal marin ah inaan ogaano in maqaayado badan oo dabiici ah ay hirgaliyeen qasabadaha jikada. Xaqiijinta tayada aan bixinno.
Qalabka jikada ee quruxda badan ee qasabada chrome
Ka sokow tayada iyo waxqabadka, guriga iyo maqaayadaha labadaba, qasabada jikada jikada ee chrome waxay bixisaa heer sare oo cabasho qurxoon. Meesha ugu horeysa maxaa yeelay naqshaddeeda qaanso-sarreysa ee isku-dhafka ah ee isku-dhafka qaabka leh shaqeynta, maadaama aad wali si fudud u heli karto jikada jikada. Naqshadeeyayaasha WOWOW waxaa ka go'an inay bixiyaan naqshado geesinimo leh oo ku habboon gudaha jikada naqshadeeye kasta. Taasi waa sababta ay qasabadaha jikada WOWOW ee jikada ee chrome dhab ahaantii aysan aheyn sida tuubada kale ee qasitaanka. Saldhigga qaswada jikada jikada ayaa ciriiri xagga kore iyo xagga hoose xagga hoose. Xariiqda dharka casaanka ah ee qasabada isku-dhafka ah ee jikada ayaa aad u qurux badan oo waxay kusiisaa jikadaada xoogaa fin. Sidoo kale marka aad wareejiso tuubada qasitaanka, naqshaddu lumin mayso bilicdeeda gabi ahaanba.
Isku soo wada duuboo, mashiinka qasitaanka jikada ee WOWOW wuxuu ku siinayaa qiimaha ugu badan ee lacagta aad ku heli karto suuqa. Tan oo dhanna, waxaad helaysaa gabal quruxsan oo qurux badan oo qalabka jikada ah oo soo jiidan doona dareen kasta oo jikadaada ka dhex jira, ha ahaato guri ama ganacsi. Qalabka jikada ee jikada jikada chrome wuxuu la imanayaa dammaanad 5-sano ah iyo 90-maalmood oo lacag celin dammaanad ah. Haddii aysan ku qancin doonin mashiinka qasitaanka jikada jikada, waxaa laguu oggol yahay inaad noo soo celiso annaga oo aan wax su'aalo ah lagaa weydiinin. Isla markiiba waxaad heli doontaa lacag celin buuxda. Waxaan aaminsanahay wax soo saarkayaga waxaanan aaminsanahay inaad jeclaan doontid xitaa jikada qolka jikada.
Faa'iidooyinka isku darka jikada qasabada chrome marka la eego:
Tilmaamo isku dhafan oo heer sare ah
Saddex hababka biyaha
Muuqaalka biyaha lagu keydsado
SKU: 2310700C Categories: Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada, Qubeyska jikada Tags: Isku darka jikada jikada, Hadalka Siiriya